ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ အထူးသငျ့တျောတဲ့ ခဝဲသီး – Youth Bar
ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ အထူးသငျ့တျောတဲ့ ခဝဲသီး…. ခဝဲသီးလေးကို စားပေးခွငျးဖွငျ့ အခုလို အကြိုးကြေးဇူးတှရေရှိနိုငျပါတယျ
ကယျလျလိုရီပါဝငျမှုနညျးပွီး ဗီတာမငျ နဲ့ သတ်တုဓါတျတှကွှေယျဝစှာပါဝငျနပွေီး ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြအာနိသငျကွှယျဝစှာပါဝငျနတေဲ့ ခဝဲသီးလေးက စားလိုကျရငျ အခုလို အကြိုးကြေးဇူးလေးတှရေရှိစနေိုငျပါတယျ။
ခဝဲသီးကို မကွာခဏစားပေးတာကခန်ဓါကိုယျတှငျးက အဆိပျအတောကျတှကေို အထိရောကျဆုံးဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ သှေးသနျ့စပွေီး အသညျးကနျြးမာရေးကိုကောငျးစပေါတယျ။ အယျလျကိုဟောကွောငျ့ အသညျးထိခိုကျတာကို လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။
အမြှငျဓါတျကွှယျဝမှုက အစာခွစေနဈကို ကနျြးမာစနေိုငျပါတယျ။ ဝမျးခြုပျမှုကငျးဝေးစပွေီး အစာအိမျကိုလညျး ကနျြးမာစနေိုငျပါတယျ။
ဝမျးခြုပျတာကွောငျ့ ဖွဈလာမယျ့ နောကျဆကျတှဲပွဿနာတှကေိုလညျး အထိရောကျဆုံးကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။အသားဝါတာကို သကျသာစနေိုငျတယျခဝဲသီးက အသားဝါတာကို သကျသာစနေိုငျတာကွောငျ့ အသားဝါရောဂါခံစားနရေသူတှအေတှကျ အထူးသငျ့တျောပါတယျ။
သှေးတှငျးသကွားဓါတျကို ထိနျးညှိပေးနိုငျပွီး အငျဆူလငျတုံ့ပွနျမှုကို ကောငျးစပေါတယျ။ အခြိုဓါတျလေးရှိပမေယျ့ သှေးတှငျးသကွားဓါတျအပျေါမှာ သကျရောကျမှု မရှိတာကွောငျ့ ဆီးခြိုရှိသူတှနေဲ့ အထူးသငျ့တျောပါတယျ။
အမြှငျဓါတျကွှယျဝစှာပါဝငျနတောကွောငျ့ အဆာခံနိုငျစပွေီး အဆီပါဝငျမှုနညျးတာကွောငျ့ ကိုလကျစထရောစားမိနိငျခွကေိုလညျး သိသိသာသာလြော့ကစြနေိုငျမှာပါ။ ဝိတျကစြနေိုငျတဲ့ ဗီတာမငျ နဲ့ သတ်တုဓါတျတှပေါဝငျနတောကွောငျ့ ဝိတျကခြငျြတဲ့သူတှစေားသုံးဖို့ သငျ့တျောပါတယျ။
ဘကျတီးရီးယားတှကေို တိုကျဖကျြပေးနိုငျပွီးဖြားနာမှုကိုကငျးစတေယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖြားနာမှုကငျးစပွေီး ရောဂါပိုးတှကေနကောကှယျခငျြတယျဆိုရငျတော့ခဝဲသီးစားပေးပါ။
ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပွီး အသားအရကေို ကနျြးမာစနေိုငျပါတယျ။ သှေးသနျ့စတောကွောငျ့ ဝကျခွံတှကေိုလညျး သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ဒါတှအေပွငျအစာအိမျကိုကနျြးမာစပွေီး ခန်ဓါကိုယျကို အငျအားပွညျ့စနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရသာရှိတဲ့ ခဝဲသီးဟငျးလေးစားပွီး အခုပွောခဲ့တဲ့ ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးလေးတှကေို ရယူလိုကျပါ။
Credit #Hello SayarWon
ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ ခဝဲသီး…. ခဝဲသီးလေးကို စားပေးခြင်းဖြင့် အခုလို အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်
ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပြီး ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ ခဝဲသီးလေးက စားလိုက်ရင် အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ခဝဲသီးကို မကြာခဏစားပေးတာကခန္ဓါကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးသန့်စေပြီး အသည်းကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် အသည်းထိခိုက်တာကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝမှုက အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်မှုကင်းဝေးစေပြီး အစာအိမ်ကိုလည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်တာကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုလည်း အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အသားဝါတာကို သက်သာစေနိုင်တယ်ခဝဲသီးက အသားဝါတာကို သက်သာစေနိုင်တာကြောင့် အသားဝါရောဂါခံစားနေရသူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး အင်ဆူလင်တုံ့ပြန်မှုကို ကောင်းစေပါတယ်။ အချိုဓါတ်လေးရှိပေမယ့် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု မရှိတာကြောင့် ဆီးချိုရှိသူတွေနဲ့ အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့် အဆာခံနိုင်စေပြီး အဆီပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် ကိုလက်စထရောစားမိနိင်ခြေကိုလည်း သိသိသာသာလျော့ကျစေနိုင်မှာပါ။ ဝိတ်ကျစေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေပါဝင်နေတာကြောင့် ဝိတ်ကျချင်တဲ့သူတွေစားသုံးဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပြီး ဖျားနာမှုကိုကင်းစေတယ်။ ဒါကြောင့် ဖျားနာမှုကင်းစေပြီး ရောဂါပိုးတွေကနေကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခဝဲသီးစားပေးပါ။
ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးသန့်စေတာကြောင့် ဝက်ခြံတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်အစာအိမ်ကိုကျန်းမာစေပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကို အင်အားပြည့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရသာရှိတဲ့ ခဝဲသီးဟင်းလေးစားပြီး အခုပြောခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ရယူလိုက်ပါ။
ဖခငျက တာဝနျ မယူပဲ စှ+နျ့ပ+ဈထားပွီး မိခငျက စ+ဈ ပွေ+း ရငျ+း ဆုံ+း သှားခဲ့တဲ့ ကလေးလေးကို မှေးစားဖို့ ရနျကုနျချေါလာပွီဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ရဲတိုကျကိုယျတိုငျရေးဆှဲထားခဲ့တဲ့ N.A.K.E.D ပနျးခြီကားကို လကျဆောငျရထားသူက ပနျခြီကားလလေံတငျရောငျးပွီး မငျးသားကိုကူညီခငျြလို့ပါတဲ့